Igumbi le-3 indlu yeKoloni entliziyweni ye-Imphal - I-Airbnb
Igumbi le-3 indlu yeKoloni entliziyweni ye-Imphal
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguShekhar And Thaza
UShekhar And Thaza yi-Superhost
Ikhaya lezinyanya laphinda lakhiwa emva kokuqhunyiswa kwebhombu ngexesha le-2nd WW ngo-1947 kwaye uhlaziyo lwakutsha nje lwaqala ngo-2007 ukubonelela iindwendwe zasekhaya. Ikhaya lisembindini wesixeko, likulungele ukuzama iindawo zokutyela ezibonelela ngokutya kwemifuno kwasekhaya kumgama wokuhamba kubandakanya iiteksi/izikhululo zebhasi. Imakethi ye-IMA yabasetyhini kuphela baseAsia, iShamu Makhong eyimbali, umfanekiso oqingqiweyo weMaharaja Bhagyachandra kunye neKangla Fort, indawo engcwele yokufunda ubutyebi belifa kunye nenkcubeko yaseManipur ikufutshane kakhulu.
Eli likhaya elikhulu, elinebala lenkundla esembindini elineentyatyambo kunye ne-bougainvillea.
4.76 · Izimvo eziyi-45
Asizamkeli izibini zasekuhlaleni.
Umbuki zindwendwe ngu- Shekhar And Thaza
Ndinikezela ngolwazi lwesidlo sakusasa, iindawo zokutyela, ezothutho kunye neendawo zabakhenkethi.